प्रचण्डले लाजिमपाट छोड्नुका तीन कारण यस्ता छन् - Muldhar Post
प्रचण्डले लाजिमपाट छोड्नुका तीन कारण यस्ता छन्
मूलधार सम्वादाता २०७४, १ पुष शनिबार 455 पटक हेरिएको
लाजिमपाट छोड्नुका तीन कारण
१. हालै छोरा प्रकाश दाहालको मृत्युसँगै आमा सिता दाहालले लाजिमपाट छोड्नु पर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । प्रचण्ड सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सिता दाहालले राति सपना देख्ने र दिउँसोमा एक्लै हुँदा प्रकाश आएजस्तै लाग्ने गरेको बताउँदै आएकी थिइन् । प्रकाश निधनले परिवारलाई पारेको पीडा भुलाउन पनि लाजिमपाट छोडिएको हो ।
२. बसाईको सुरुदेखि नै विवादित बनेको घर भएका कारण प्रचण्डले पनि पहिलै राजिमपाट छोड्न चाहेका थिए । तर कहाँ र कसरी सर्ने, नयाँ घर पनि विवाद आउने डरले थप आलोजना हुने डरले लाजिमपाट छोडिएको थिएन ।
लाजिमपाट किनेको भन्ने आरोपबाट प्रचण्ड मुक्त हुन चाहन्थे । लाजिमपाटको उक्त घर प्रचण्डले किनेको तर कागजी रुपमा मात्रै अरुको नाममा गरिएको भन्ने अरोप लाग्दै आएको थियो । लाजिमपाट किनेको होइन भन्ने प्रचण्ड कुनै न कुनै समयमा देखउन चाहन्थे । त्यो साइत यतिबेला जुरेको हो ।
३. जनयुद्धमा रोल्पा, रुकुमका जनताको घर भन्दा नयाँ बजारको घर ठूलो र नयाँ बजारको भन्दा ठूलो भएपनि प्रचण्डको दैनिक भेटघाट, सचिवालय र सुरक्षाकर्मीको संख्याले लाजिमपाट सानो हुँदै गएको थियो । पार्किङदेखि विहानको मार्निङवाकको लागि लाजिमपाटको कम्पाण्ड सानो भएकै हो ।
अझ पार्टी एकतापछि हुने जमघटलाई लाजिमपाटले धान्न नसक्ने भएका कारण नयाँ घर सर्नु परेको बताइएको छ ।
प्रचण्डका नयाँ घरबेटी पनी समानुपातिकबाट सांसद बन्दै
शुक्रबार अजय सुमार्गीको घरमा भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटपछि प्रचण्ड सिधै खुमलटारस्थित नयाँ घर गएका थिए । लाजिमपाटबाट सामान सार्न केही दिन लाग्ने भएकाले पूर्णरुपमा भने छोडिएको छैन ।
सुरक्षाकर्मीसहित सचिवालयका केही सदस्य लाजिमपाटमै बसेका छन् । नयाँ घर लाजिमपाट भन्दा धेरै सुविधा सम्पन्‍न भएको बताइएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाजिम्पाटबाट डेरा सारेका छन् ।
प्रचण्डले ललितपुर महानगरपालिका–१५ स्थित खुमलटारमा रहेको निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको घरलाई शुक्रबार साँझदेखि आफ्नो नयाँ डेरा बनाएका हुन् । अधिकारीको ललितपुर मानभवनमा रहेको अर्को घरमा एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताबीच पार्टी एकता र चुनावी तालमेलको सहमति भएको थियो ।
शैलुङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र पावर कम्पनीका अध्यक्ष एबं कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अधिकारी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सूचीमा छन् । समानुपातिक सूचीको बन्दसूचीमा उनको नाम ३३ नम्बरमा छ ।
प्रचण्डले छोरा प्रकाशको निधन, लाजिम्पाट निवासमा जाने बाटो साँघुरो हुनु र घर चुहिने यी ३ कारणले डेरा सारेको बताइएको छ । प्रचण्ड विहीबार साँझ नै त्यहाँ बस्न सुरु गरेका छन् । तर, मासिकरुपमा भाडा कति तिर्ने भन्ने बारेमा नटुंगिएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रचण्ड यसअघि ५ वर्षदेखि लाजिम्पाट निवासमा बस्दै आएका थिए ।